Wakiilka Pual Pogba Ee Mino Raiola Oo Markale Afka Furtay Iyo Xaalada Mustaqbalka Pogba Oo Uu Ka Hadlay. - Gool24.Net
Wakiilka Pual Pogba Ee Mino Raiola Oo Markale Afka Furtay Iyo Xaalada Mustaqbalka Pogba Oo Uu Ka Hadlay.
Kadib markii uu todobaadkii la soo dhaafay uu wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola shaaciyay in qof kasta oo Manchester United joogaa uu og yahay rabitaanka Pogba ee ah in uu xagaagan ka baxo Old Trafford, waxa uu markale Mino Raiola ka hadlay xaalada Pual Pogba.
Mino Raiola ayaa sheegay in Pual Pogba aanu wax qalad ah samayn isla markaana uu yahay xirfadleh markasta ixtiraam muujiya wuxuuna ka difaacay eedayntii loo soo jeedinayay.
Waraysi khaas ah oo uu Mino Raiola siiyay wariyaha talkSPORT ee Jim White wuxuuna ku sheegay in waqti dheer ay maamulka United ogaayeen dareenka Pogba ee ah in uu baxo.
Mino Raiola oo difaacaya Pual Pogba ayaa yidhi: “Ciyaartoygu wax qalad ah muu samayn.Waxa uu soo ahaa mid ixtiraam leh oo dhinac kastaba xirfadle mar walba ka soo ahaa”.
Laakiin Mino Raiola ayaa sheegay in waqti dheer ay maamulka Manchester United ogaayeen dareenka bixitaanka Pogba doonayay wuxuuna yidhi: “Kooxdu waxay dareenkiisa ogayd waqti dheer”.
“Waa ceeb in dadka kale ay jecel yihiin oo kaliya in ay eedeeyaan iyaga oo aan hayn warka saxda ah, waxaan sidoo kale ka xumahay in ayna kooxdu wax ka dhan ah samayn”. ayuu Mino Raiola hadaliisa raaciyay.
Laakiin Mino Raiola ayaa sheegay in uu rajaynayo in la heli doono xal u fiican dhinacyada oo dhan oo uu Pogba ku bixi karo wuxuuna yidhi: “Waxan rajaynayaa in uu si deg deg ah u jiri doono xal qancinaya dhinacyada oo dhami”.
Man United ayaan doonayn in ay Pual Pogba iibiso iyada oo Real Madrid ku cadaadinaysa in ay bixiso 150 milyan balse Mino Raiola ayaa ka shaqaynaya sidii uu Pogba ugu suurtogalin lahaa in uu Madrid ku biiro.